May Nyane: နှစ်ခါသုံးခါ အလိမ်ခံရမှတော့ ကိုယ့်အပြစ်ပေါ့
နှစ်ခါသုံးခါ အလိမ်ခံရမှတော့ ကိုယ့်အပြစ်ပေါ့
ပီရူးနိုင်ငံ သမ္မတဟောင်း ဂျပန်နွယ်ဖွား ဖူဂျီမိုရီကို ပီရူးနိုင်ငံ တရားရုံးက သူသမ္မတအနေနဲ့ အုပ်ချုပ်တုံးက တိုင်း ပြည်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေးကစလို့ ချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုပေါင်း များစွာအတွက် ထောင်ဒဏ် ၂၅နှစ်ကျခံဖို့ တလောလေးက ဆုံးဖြတ်စီရင်ချက် ချခဲ့သည်။
ပီရူးနိုင်ငံမှာ ဖူဂျီမိုရီ သမ္မတလုပ်ခဲ့တုံးက တိုင်းပြည်အတွက် တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း မယ်မယ်ရရ မလုပ် ခဲ့ဘူးဟု ဆိုကြသည်။ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကလည်း အပုံအပင်။ ကိုယ်ကျိုးအတွက် အိတ်ထဲ ထည့်ခဲ့သည့် ပိုက်ဆံများ ကလည်း မနည်းဟု ဆိုကြသည်။ အာဏာရှင်လို အုပ်ချုပ်သူတွေဟာ တဦးနဲ့တဦး သိပ်မကွာလှပါ။ ကိုယ့်အာဏာ အတွက်ကလွဲ၍ ဘာကိုမျှ ဂရုစိုက်သူ တွေလည်း မဟုတ်ပါ။
ဖူဂျီမိုရီနှင့် ပတ်သက်၍ ကျနော့်တွင် မှတ်မှတ်ရရ သတင်းတခု ကြားခဲ့ဖတ်ခဲ့ ဖူးသည်။ နှစ်အတိအကျတော့ မမှတ်မိတော့။ လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်နှစ်ကျော် ဆယ့်ငါးနှစ်ခန့်က ဖြစ်မည်ဟု ထင်သည်။ ထိုသတင်း အချက် အလက်ကတော့ ပီရူးနိုင်ငံတွင် တစတစ ပြန့်ပွား လာနေသော အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ အေအိုင်ဒီအက်စ်နှင့် ပတ်သက်၍ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ပီရူးကျေးလက် ဒေသများတွင် ဆင်းရဲသားများ ထိုရောဂါအတွက် ဆေးဝါးမကုသနိုင်ကြသောကြောင့် အများအပြား သေဆုံးနေခဲ့ကြသည်။ ဒေသခံအန်ဂျီအို အဖွဲ့အစည်းများက ဖူဂျီမိုရီ အစိုးရကို အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ အေအိုင်ဒီအက်စ် ခံစားနေရသော နိုင်ငံအတွင်းမှ ဆင်းရဲသားများအတွက် အကူအညီပေးရန် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ဖိအားပေး တိုက်တွန်းခဲ့ကြသည်။
ထိုအချိန်ကာလမျိုးတွင် သမ္မတလုပ်သူ ဖူဂျီမိုရီက ဘာထလုပ်သည် ထင်သနည်း။ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး အတွက်ဟု ဆိုကာ နိုင်ငံခြားမှ တိုက်လေယာဉ်အသစ် ဆယ်စင်း ဝယ်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုတိုက် လေယဉ်များ ဝယ်ဖို့အတွက် ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ရာနှင့်ချီ၍ သုံးစွဲခဲ့သည်။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ သယ်ဆောင်နေသူ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ် ခံစားနေရသူ ဆင်းရဲသားများအတွက် ဖူဂျီမိုရီ ပေးလိုက်သော အဖြေပင်ဖြစ်တော့သည်။ ထိုငွေများသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် အမေရိကန် အပါအဝင် အနောက်နိုင်ငံအချို့မှ ပီရူးနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ကူညီထားသော ငွေများဖြစ်သည်။ တိုက်လေယာဉ်ဝယ်ဖို့ ကူညီသော ငွေများမဟုတ်ပါ။ လက်ထဲငွေ ရောက်လာသောအခါ အာဏာရှင်တို့သည် သူတို့လုပ်ချင်တာကိုသာ လုပ်လေ့ရှိသည်။
အဖြစ်ကတော့ ဆင်ဆင်တူသည်။ မြန်မာပြည်တွင် ဒီနှစ် ၂ဝ၁ဝ အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲအသစ် ပြုလုပ်ပေးမည်ဟု စစ်အစိုးရက ထပ်မံ အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့သည်။ စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီ ဘာညာတွေကလည်း ပါလိုက် သေးသည်။ တချိန်တည်းမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံက ရုရှားအစိုးရထံမှ တိုက်လေယာဉ်များ ဝယ်ယူရန် သဘောတူ စာချုပ်လိုက်သည်ဟု မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်းက ကြားရသည်။ မြန်မာပြည်တွင် တိုက်လေယာဉ်က ပြည်သူ ပြည်သား များထက် အရေးကြီးနေပုံရသည်။ မြန်မာ ပြည်တွင်လည်း ပီရူးနိုင်ငံမှာ ကြုံခဲ့သလို အိတ်ခ်ျ အိုင်ဗွီ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါနှင့် တိုင်းသူပြည်သားများ ရင်ဆိုင်နေရသည်မှာ ဆယ်စုနှစ် တခုမကတော့။ နောက်တချက်ကလည်း လတ်တလော အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်ကြည့်ပါက ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်အတွင်း နာဂစ် မုန်တိုင်း ဒဏ်ကြောင့် လူတသိန်းကျော် သေဆုံးခဲ့ကာ ရှိသမျှပိုင်ဆိုင်သမျှ ပစ္စည်းများ ဆုံရှုံးခဲ့ရသော လယ်သမားများ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တွင် သန်းနှင့်ချီ၍ ရှိနေသည်။ သူတို့အတွက် စစ်အစိုးရက လောက်လောက် လားလား ကူညီခဲ့ ပါသလား။ မေးရမည့် မေးခွန်းဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကလည်း နိုင်ငံရပ်ခြား အစိုးရများနှင့် အဖွဲ့ အစည်း များက ကူညီပါမည်ဟု ပြောလာသည်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကူညီခွင့် ပေးခဲ့ပါသလား။ စစ်အစိုးရ၏ လက်ကတုံး တောင်ဝှေး သဖွယ် ဖြစ်နေသော လူမှုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းအတုများ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တွင် လမ်းသလား နေကြသည်ကိုတော့ မြင်နေရ ကြားနေရသည်။
များမကြာမီကလည်း ရန်ကုန်တွင် အသေးစား ပြိုင်ကားကွင်းဖွင့်ပွဲ လုပ်သည်တဲ့။ ပြိုင်ကားမောင်းနေရအောင် မြန်မာပြည် ၏ ဓနက အဲသလောက် ပိုလျှံနေလို့လားဟု မေးစရာဖြစ်လာသည်။ ဂေါက်သီးကွင်းသစ်များ ဖွင့်လှစ်၍ ဂေါက်သီး ရိုက်နေသည်ပင် လွန်လှပြီ ဖြစ်သည်။ အခုတော့ ပြိုင်ကားမောင်း ကားကွင်းတဲ့။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏မြေး ပြိုင်ကားရောဂါ အရူးထရာမှ ဖြစ်လာခဲ့သည့် စနက်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ မြန်မာပြည်က စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသည် အာဏာမက်ခြင်းနှင့် မိုက်မဲခြင်းတို့တွင် သူမတူအောင် ထူးချွန်သူများ ဖြစ်သည်။ နေရာတကာတွင်လည်း ဝင်ပါသည်။ ကြည့်ပါလား မြန်မာ့တူရိယာများနှင့် အနောက်တိုင်းတူရိယာများ တွဲဖက်တီးမှုတ်ခြင်း မပြုရဆိုပြီး အမိန့် ထုတ်လိုက်သေးသည်။ အနုပညာကိစ္စကို အနုပညာသည်များသာ လွတ်လွတ် လပ်လပ် ဖန်တီးသီကုံးဖို့လိုသည်။ အနုပညာနှင့် သင်းတို့ ဘာဆိုင်သနည်း။
ငွေအကုန့်တကာ အကုန်ဆုံး ကိစ္စကြီးပြန်ကြည့်မည် ဆိုပါက နေပြည်တော်သစ်ကြီး တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ရေးအတွက် မြေအောက်လှိုဏ်ခေါင်းများ တူးဖော် ဆောက်လုပ်နေခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်သားများ အတွက် မြို့တော်နောက်ထပ် အသစ်တခု မလိုပါ။ အမှောင်ထဲတွင် ဆင်းနေစရာ မလိုသည့်အတွက် လှိုင်ခေါင်းများ ဥမင်များလည်း မလိုပါ။ နိုင်ငံသားတို့ အတွက်အလွန် လိုအပ်နေသည် များကတော့ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတို့အတွက် အကူအညီများသာ ဖြစ်သည်။ ထိုကဏ္ဍများအတွက် ငွေကိုမသုံးဘဲ တလွဲတွင် ဆံပင်ကောင်း နေကြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်များ ရောဂါအထဆုံး ကိစ္စကတော့ ညူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖို တည်ဆောက်ရေး ဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်တွင် ညူကလီးယား စွမ်းအင်သုံးဖို့ အရေးတကြီး လိုနေသလားဟု စောကြောစရာ ရှိလာသည်။ မြန်မာပြည်က ထွက်ရှိနေသော သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့သည် တကယ်တန်းဆိုပါက ပြည်တွင်း၌ စွမ်းအင်အဖြစ် ပြည်သူများ သုံးစွဲရန် လက်ဦးဆုံး အရေးကြီး သည်။ ပိုလျှံသည်ကို နိုင်ငံခြား ထုတ်ရောင်းတာ မပြောလို။ နောက်ထပ်လည်း ကမ်းလွန် ပင်လယ်ပြင်မှ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ များ ထပ်မံထွက်ရှိဦးမည်။ စွမ်းအင်အတွက် မြန်မာပြည်သားတို့ ပူစရာ မလိုပါ။ သို့သော် မိမိတိုင်းပြည်မှ သဘာဝ အရင်း အမြစ်ကို နိုင်ငံသားတို့ သုံးစွဲခွင့် မရသည်မှာ အတော် ရင်နာဖို့ကောင်းသည်။
ညူကလီးယား ရောဂါအရူးထသောကြောင့် စစ်ဗိုလ်အများအပြားကို ရုရှားသို့ ပညာသင်လွှတ်သည်။ ငွေအမြောက်အများ သုံးစွဲရသည်။ ညူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖိုအတွက် စတင်ပြင်ဆင်နေသည် ဟုလည်း ကြားရသည်။ ထိုစရိတ်များက တပြားနှစ်ပြားနှင့် လုပ်လို့ရသည့် အမျိုးမဟုတ်။ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းရာနှင့် ထောင်နှင့်ချီ၍ သုံးစွဲရမည့် ကိစ္စမျိုးဖြစ်သည်။ သို့သော် တချိန်တည်းမှာလည်း ပြည်သူများကတော့ ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းနှင့် ငတ်၍နေကြသည်။ တိုင်းပြည်တပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ခြင်းကို ဗိုလ်ချုပ်များ ဘယ်လိုနားလည် နေသလဲမသိ။
မြောက်ကိုရီးယားကို ကြည့်၍ မြင်နိုင်သည်။ မြောက်ကိုရီးယားသည် အနုမြူထိပ်ဖူးတပ် ဒုံးပျံများ ပစ်လွှတ် နိုင် သည့် အဆင့်တွင် ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီနှင့် လွတ်လပ်မှုဆိုသည်မှာ ရေပြင်တွင် အရုပ်ရေး သည့်နှယ်။ ထားတော့။ သို့သော် ထိုအစိုးရသည် သူ့နိုင်ငံသားများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် စားဝတ်နေရေးကို ပြေလည်အောင် မဖြေရှင်းနိုင်သေး။ ကလေးငယ်အများစု ပါဝင်သော အငတ်ဘေးနှင့် သေဆုံးခဲ့သူ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားများ သန်းနှင့်ချီ၍ ရှိခဲ့သည်ကို ကျနော်တို့ မမေ့သင့်။ ရိုးရိုးနှင့် လွယ်လွယ်ပြောရပါက အနုမြူထိပ်ဖူးတပ် ဒုံးကျည်သည် ကိုက်စား၍မရပါ။ အနုမြူ ထိပ်ဖူးတပ် ဒုံးကျည်အလုံးတထောင် ပိုင်ပြီး တိုင်းသူပြည်သားများက ငတ်နေသည် မွဲနေသည် ပညာမတတ်၊ နိုင်ငံတကာ အလယ်တွင်လည်း မဝင်ဆန့်ဟု ဆိုပါက ရေရှည်တွင် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကိုသာ သယ်ဆောင်လာမည် ဖြစ်သည်။
တဖက်တွင်လည်း စစ်အစိုးရကို ဖားနေသူများက ပြောနေတာတွေ ကြားနေရသည်။ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့ အချိန်အခါ တခုကို ရောက်သည်နှင့် တိုင်းပြည်ကို ဗိုလ်ချုပ်များ လက်ထဲမှနေ၍ တစတစနှင့် ပြုပြင်ယူသွား မည်ဟု ဆိုနေကြသည်။ ပြောသည့်အတိုင်း ဖြစ်ပါက ပန်းကုံးစွပ်ကာ ချီးကျူးပါမည်။ သို့သော် စစ်တပ်အသာစီး ယူထားသော အစိုးရတခုအောက်တွင် လူ့အဖွဲ့အစည်း တခုသည် ဘယ်လောက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်သနည်း။ ဤမေးခွန်းကိုတော့ ထိုသူများ ဖြေဖို့လိုသည်။ နောက်နောင်မှ ကျနော်တို့လည်း အတွက်မှားသွားတယ်ဗျာ ဒီဗိုလ်ချုပ်တွေကို ကျနော်တို့ နားချလို့ရလိမ့်မယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ၊ ဒီလောက်ခေါင်းမာ လိမ့်မယ်လို့ အစက မထင် ခဲ့ဘူးဟု တောင်းပန်သော်လည်း တကယ်တန်း နစ်နာရမည့် သူများကတော့ အများစုသော နိုင်ငံသားများသာ ဖြစ်သည်ကို မမေ့သင့်။ တံတားအောက်က စီးသွားသော ရေများသည့် တံတားအောက်ကို ပြန်လာလေ့ မရှိတာကို သတိချပ်သင့်သည်။
ပြန်ကောက်ရမည် ဆိုပါက ဖူဂျီမိုရီသည် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် တက်လာခဲ့သော ပီရူးနိုင်ငံ၏ သမ္မတ ဖြစ်သည်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ် ဖြစ်ခဲ့ဘူးသူ မဟုတ်။ သို့သော် သူသည်လည်း အာဏာရှင် ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ခဲ့သည်။ တိုင်းသူပြည်သား မျက်နှာကို မထောက်ထားခဲ့။ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် တက်လာတိုင်း ဒီမိုကရေစီနှင့် လွတ်လပ်ခြင်းကို မြတ်နိုးသော ခေါင်းဆောင်ဟု ကောက်ချက်ချ၍မရ။ ရွေးကောက်ပွဲဘန်းပြ၍ တက်လာသူ သည် တိုင်းသူပြည်သားတို့ အကျိုးကို ဆောင်လိမ့်မည်ဟု ရူးရူးမိုက်မိုက် မတွက်ချက်သင့်။
မြန်မာ၏ နိုင်ငံရေးအဆင်က ပီရူးထက် ပိုဆိုးဖို့ ရှိသည်။ ရွေးကောက်ပွဲ ရှိမည်ဟု ဆိုသော်လည်း စစ်ဗိုလ်များက အော်တိုမက်တစ် ၂၅% ပါလီမန်မှာ နေရာယူမည်။ အခြေခံဥပဒေသစ်ကလည်း စစ်ဗိုလ်များအတွက်သာ ဖေးမပေး ထားသည့် ဥပဒေဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်ဟာ ချောက်ထဲကြတော့မဲ့ အခြေအနေမှာ ရောက်နေတယ်လို့ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က ရှု့မြင်ရင် လက်ရှိအစိုးရ လက်ထဲကနေ နိုင်ငံတော် အာဏာကို သိမ်းလို့ရတယ်လို့ ဆိုထားမှတော့ သူတို့ဖို့ ချည်းပဲပေါ့။
နိဂုံးချုပ်ရပါက ၂ဝ၁ဝ တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖြစ်၍ အစိုးရသစ် ပါလီမန်သစ်များက ရှိလာသည့်တိုင် အခွင့် အရေး မှန်သမျှကို စစ်တပ်နှင့် သူတို့နောက်မြှီးဆွဲများက ဖားလာသိမ်း ငါးလာသိမ်း အကုန်သူတို့ အိတ်ထဲ ထည့်နေသမျှ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်နိုင်မည် မဟုတ် (သို့မဟုတ်) လုပ်လိမ့်မည် မဟုတ်ဟု တင်ပြလိုရင်းသာ ဖြစ်သည်။
သက်ဆိုင်သူအားလုံးကို ခဏခဏ အလိမ်မခံကြရပါစေနဲ့လို့ သတိပေးလိုက် ရပေတော့သည်။
၇ ရက် ဇန်နဝါရီလ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်
ရွက်မွန်စာမျက်နှာ http://fine-leaves.blogspot.com/2010/01/blog-post_08.html မှ...
Z M. Good Job. Excellent.
I also give thanks to May Nyein, who posted the article on her blog.
P Y O
အန်တီမေငြိမ်းကတက္ကသိုလ်ကဆရာမတယောက်ဆိုတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်ပေးနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သမီးလေငယ်ငယ်လေးကတည်းကစာတွေအရမ်းကြိုးစားခဲ့ရတယ်။ ငယ်ငယ်လေးကလည်းကသမီးအတွက်တော့ပညာရေးဟာသမီးရဲ့အဖော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တီချယ်လို့ပဲခေါ်ပါရစေနော်။ သမီးလေမြန်မာနိုင်ငံကဘွဲ့လွန်ရပြီးလူတိုင်းသွားချင်တဲ့လူတိုင်းမျှော်လင့်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကschlarshipကိုရခဲ့ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းမဟုတ်တဲ့သမီးအတွက်တော့တကယ့်ကိုအဲဒိscholarshipဟာတော်တော်ကိုခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ သမီးခံစားချက်လေးမျှဝေပါရစေ။ သမီးကိုသမီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကအားကျကြတယ်တီချယ်။ သမီးရင်ထဲကနေပြောချင်နေခဲ့တယ်။ အားကျမနေကြပါနဲ့လို့လေ။ ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောက်လာတယ်တီချယ်။ သမီးရဲ့အတွေ့အကြုံက ပညာရေးကိုအခြေခံပါတယ်။ သမီးလေseminarတက်လေတိုင်းရင်အမြဲနာတယ်။ သမီးတို့နိုင်ငံခြားသားကျောင်းသားတွေရတဲ့resultတွေကမြင့်နေပေမဲ့လည်းသူတို့ဂျပန်တွေရတဲ့resultကသိပ်မမြင့်ပေမဲ့လည်းသူတို့ကျောင်းသားတွေကိုမဆူပဲသမီးတို့နိုင်ငံခြားသားကျောင်းသားတွေကိုပဲဆူတယ်။သူတို့ကသမီးတို့ကိုscholarပေးထားရတယ်။ လုပ်ကြဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ တကယ်ပြောရရင်တော့သမီးတို့ကbrain workerတွေပါပဲတီချယ်ရယ်။ သမီးလေသမီးresearch resultရဲ့အဖြေတွေကိုပေးလိုက်ရတိုင်းငါ့ဦးနှောက်တွေဖောက်ပေးလိုက်ရပြန်ကောလို့ခံစားရတယ်။ သူတို့ကိုမပေးပဲသမီးတို့နိုင်ငံအတွက်သာအသုံးချခွင့်ရကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်များကောင်းလိုက်မလဲလို့အခါခါတွေးမိပါတယ်။ သမီးလေဘာနိုင်ငံရေးမှမသိပါဘူး။ သမီးသိတာကသမီးနိုင်ငံကိုသမီးချစ်တယ်။ သမီးလေသမီးကြိုးစားမှုတွေကိုသမီးနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုအတွက်ပေးလိုက်ချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့...သမီးတို့မိဘနဲ့ခွဲပြီးနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ပြိုင်ဆိုင်နေရတယ်။ ဦးနှောက်တွေဖောက်စားခံနေရတယ်ဆိုတာဘယ်သူကမှအသိအမှတ်မပြုကြဘူးနော်။ သမီးဝမ်းနည်းလေတိုင်းသမီးကိုသမီးအားတင်းပြီးအားပေးတဲ့စကားလေးရှိတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့လည်းဂျပန်နိုင်ငံမှာပညာတွေသင်ပြီးသူတို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ပညာနဲ့ပဲသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တာလို့လေ။ သမီးတို့မြန်မာတွေမညံ့ကြပါဘူးတီချယ်။ သမီးတို့လည်းတနေ့ကျရင်တော့သူတို့ကိုဆုံးမခွင့်ရမှာနော်။ ဘယ်သူကိုမှသမီးခံစားချက်ကိုမပြောခဲ့ပါဘူး။ စာလည်းကောင်းကောင်းမရေးတတ်တော့သမီးခံစားချက်လေးကိုအခြေခံပြီးတီချယ်ဆောင်းပါးတပုဒ်လောက်ရေးပေးပါနော်။ အိမ်ကိုအရမ်းလွမ်းတယ်တီချယ်ရယ်။
သမီး စာလေးဝင်နေတာ အန်တီ မတွေ့မိခဲ့ဘူး။ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ သမီး။ အချိန်တချိန်ရင်းရတယ်လို့ သဘောထားပါ။ ရတနာ၃ပါးကို အာရုံပြုပြီး အချိန်တွေကို ဖြတ်ကျော်ပါ။ တခြားလူမျိုးတွေကိုလည်း မမုန်းပါနဲ့။ တချိန် ရင်ပေါင်တန်းနိုင်အောင် လုပ်ဖို့ တွန်းအားလို့ပဲ မှတ်ပါ။ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေ...
လေယာဉ်တွေဝယ်မယ့်အစား ဆေးရုံမှာ ပတ်တီးကိုဘဲ လောက်အောင်ထားပေးပါ။ စက်မှုဇုန်တွေမှာ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမြင့်မားအောင် မီးမှန်အောင်ပေးပါ။ နိုက်ကလပ်တွေကို မီးပုံမှန်ပေးမယ့်အစား စာသင်ကျောင်းတွေ၊ ဆေးရုံတွေ ကို ဦးစားပေးပါ။ လယ်သမားတွေကို အမတော်ကြေးတွေချေးပေးပါ။ ပညာရေးကိုလည်း တကယ်စာတတ်အောင်သင်ကြားနိုင် အောင် သင်ထောက်ကူပစည်းတွေပံ့ပိုးပေးပါ။ ဒါတွေအားလုံးကို လုပ်ပေးရင်တောင်မှ လေယာဉ်တွေဝယ်တဲ့ ဒေါ်လာသန်း500 ဖိုးလောက် ကုန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ . . နိုင်ငံတော်လူကြီးမင်းများ အမြန်ဆုံး အမြင်မှန်ရကြပါစေ။